भूलेर पनि नलगाउनुहोस् महिलाले यस्तो सिन्दुर,नत्र ऋणमा डुब्नसक्छन् पति! |
भूलेर पनि नलगाउनुहोस् महिलाले यस्तो सिन्दुर,नत्र ऋणमा डुब्नसक्छन् पति!
November 23, 2021 November 23, 2021 adminLeaveaComment on भूलेर पनि नलगाउनुहोस् महिलाले यस्तो सिन्दुर,नत्र ऋणमा डुब्नसक्छन् पति!
काठमाडौँ । भर्खरको विवाहित महिलाले विशेष ध्यान राख्नु पर्छ कि उनीहरूले विवाहको समयमा पाएको सिन्दूर केही दिनको लागि लगाउनुपर्दृछ। र त्यो सिन्दूर सम्हालेर राख्नु पर्छ।हिन्दुधर्म अनुसार विवाहित महिलाहरुले सिन्दुर लगाउनु एकदमै महत्वपूर्ण मानिन्छ। किनकी सिन्दुरलाई आफ्नो पतिको निशानी मानिन्छ।यसलाई यस्तो पनि भन्ने गरिन्छ कि महिलाले आफ्नो पतिको लामो उमेरको लागी र सुख समृद्धि को लागी लगाउने गर्दछन्।तर जानेर अथवा नजानेर महिलाहरु सिन्दुर लगाउने समयमा कुनै यस्ता गल्ती गर्न जान्छन् जसको नराम्रो असर पतिको भाग्यमा पर्न जान्छ। हिन्दुशास्त्रअनुसार सिन्दुर ठिक तरिकाले लगाउनुपर्दछ।
यसरी लगाउनुहोस् सिन्दुर:जतिबेला तपाई सिन्दुर लगाउनुहुन्छ त्यतीबेला माता पार्वतीको मनमनै ध्यान गनुहोस् किनकी माता पार्वतीले अखंड सौभाग्यवतीको वरदान दिनुहुन्छ । यदि तपाई पनि यस तरिकाले सिन्दूर लगाउनुहुन्छ भने, आजै तपाईंको बानी बदल्नुहोस्।आउनुहोस जानौँ सिन्दुर लगाउँदा महिलाले गर्ने गल्तीको बारेमा :सिउँदोमा सिन्दुरलाई लुकाउनु:आजकल महिलाको फेसनका कारण सिउँदोमा सिन्दुर देखाउन लागी मात्रै थोरै लगाइन्छ। जुन पूर्ण रूपमा गलत हो।तपाईंको पतिले यस बानीको लागि तिर्नुपर्नेछ। धर्मशास्त्रका अनुसार सिन्दूर पनि सिउँदोमा देखिनुपर्दछ। सिन्दूर लुकाउँदा श्रीमान्को आदर हुदैन ।
लामो सिन्दूर लगाउनुहोस्:धर्मशास्त्रका अनुसार सिउँदोमा लामो सिन्दूर लगाउने महिलाले आफ्ना पतिबाट धेरै सम्मान पाउँछन्। यो मात्र होईन, उनको पतिले जता पनि सम्मान पाउछन्। यस्तो अवस्थामा महिलाले निधारमा सानो लाइन सिन्दूर लगाउनु हुँदैन।नाकको सिधा सिन्दुर लगाउनु:सुहागन महिलाहरूले सँधै नाकको सिधा सिन्दूर लगाउनु पर्छ। टेढो सिन्दूर लगाउँदा पतिको भाग्य खराब हुन्छ। साथै, पति जहिले पनि समस्या नै समस्याहरूले घेरिन सक्छन्। यदि तपाई आफ्नो श्रीमानको भलाइ चाहानुहुन्छ भने सिधा रेखामा सिन्दूर लगाउनुहोस्।
कहिृकाहीँ मात्र सिन्दुर लगाउनु:काम गर्ने महिलाले खासै सिन्दुर लगाउदैनन् तर महान् चााडपर्वहरुमा भने निश्चित रुपमा सिन्दुर लगाउँछन् । तर यो गलत हो। दिनहुँ सिन्दूर लगाउने प्रयास गर्नुहोस् किनकि यसले पति र पत्नीमा प्रेम बढाउँदछ।ननुहाइकन सिन्दुर नलगाउनुहोस्:महिलाहरूले यसको धेरै ध्यान राख्नुपर्दछ कि ननुहाई सिन्दूर कहिले पनि लगाउनु हुँदैन। साथै, कुनै अर्को महिलाको सिन्दूर प्रयोग नगर्नुहोस् र कसैलाई पनि तपाईंको सिन्दूर नदिनुहोस्। यसले पतिको प्रेमलाई विभाजित गर्दछ।
खसेको सिन्दुर लगाउनु:कुनै बेला सिन्दूर लगाउँदा डिब्बा महिलाको हातबाट फुस्केर पूरै सिन्दूर भुईमा पोखिन्छ। यस्तो अवस्थामा, महिलाले खसेको सिन्दूर फेरि बक्समा भर्ने गर्दछन् र फेरि त्यही सिन्दुरलाई नै प्रयोगमा ल्याउँदछन्। यो गर्नु खराब हो। एक पटक सिन्दूर भूइँमा खस्दा यो अशुद्ध हुन्छ। यो फेरि प्रयोग गर्नु हुँदैन।पतिको हातबाट सिन्दुर नलगाउनु:हप्तामा कम्तिमा १ पटक सिउँदो पतिको हातबाट सिन्दूरले भर्नुहोस्। जे भए पनि तपाईले सिन्दूर आफ्नो पतिको लागी नै त लगाउनुहुनछ।सामान्यतया, पतिले विवाहको दिनमा मात्र महिलाको सिउँदो भर्दछन्। त्यस पछि, महिलाले आफ्नो हातले सिन्दूर लगाउँछिन्, तर पतिको हातले सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँदा यसको महत्त्व अझ बढि हुन जान्छ।
यस्ता गल्ति गर्दै नगर्नुहोस,नत्र बढ्छ युरिक एसिड।बेलैमा ध्यान दिनुहोस
एउटा अधुरो प्रेमकथाःसाउदीमा रहेका प्रदीपलाई भेट्दै नभेटी संसार छाडेर गइन् लक्ष्मी
घरमा राख्नुहोस् यी ६ बस्तु,धनको अभाव कहिल्यै खड्किदैन
हजुरको नाम अ,र,स बाट सुरु हुन्छ भने जान्नुहोस यस्तो हुँदै छ हजुरको जीवन।यसरी चिनिन्छ नामको अक्षरबाट चरित्र र भाग्य
यी ६ लक्षण भएका श्रीमतीले चम्काउछन् श्रीमानको भाग्य